ရေပန်းစား စကားလုံး : ဂျပန်စာ? ဗန်းစကား??? | Working Friends
ရေပန်းစား စကားလုံး : ဂျပန်စာ? ဗန်းစကား???
2017年12月4日 2018年9月21日 EM
ခေတ်ပေါ်စကား၊ရေပန်းစားစကားလုံးကို ဆုပေးတယ်ဆိုတော့ အဓိပ္ပါယ်ရှိရဲ့လားလို့ စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်မှာက နှစ်တိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ ဗန်းစကား၊ခေတ်ပေါ်စကားလုံးတွေကို စာအုပ်သီးသန့်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီပါတယ်။ အဘိဓါန်စာအုပ်တွေမှာ ရှာမရတဲ့ စကားလုံး အဓိပ္ပါယ်ကို စစ်တမ်းကောက် ရေးသားစာအုပ်ထုတ်ထားတာပါ။ စစ်တမ်းကောက်လို့ ရတဲ့အထဲက ရေပန်းအစားဆုံး စကားလုံးတွေကို ရွေးချယ်ပြီး၊ထိုစကားလုံးတွေကို အသုံးပြုတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ဖိတ်ခေါ်ဆုချီးမြှင့်ပေးတာပါတဲ့။
စကာတင် စကားလုံး၃၀ထဲမှ စကားလုံး ၁၀/၁၁လောက် ဆုပေးတတ်ပါတယ်။ကျွန်မ ဒီဆုကို ပထမဦးဆုံး ကြားသိတာက ဂျပန်စကားပြောအတန်းထဲမှာပါ။၂၀၁၄ခုနှစ်ကပေါ့။အဲ့တုန်းက abenomics ဆိုတဲ့ ရေပန်းစားစကားလုံးလည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။သတင်းစာနှင့် အင်တာနက်မှာ ပလူပျံသွားတဲ့ စကားလုံးတွေပေါ့။ယခု ၂၀၁၇ခုနှစ်ကတော့ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာသိရမှာပါ။ ၂၀၁၆ခုနှစ်က ဆုရ ရေပန်းစားတဲ့ စကားလုံးတွေကို ဗဟုသုတအဖြစ် ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကာတင် စကားလုံး ၃၀ထဲမှာ ဂျပန်ကာတွန်း [Your Name]ဆိုတဲ့ Kimi no Na wa လည်းပါဝင်ပေမဲ့၊ ဆုရတဲ့အထဲတော့ မပါလိုက်ပါဘူး။ တော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ စကားလုံးလေးတွေပါ။အဆင့်လိုက် ဆုပေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက် နံပါတ်မတပ်တော့ပါဘူး။( အသုံးအနှုန်းအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာသာပြန်အမှားရှိနိုင်ပါတယ်။အမှားရှိပါက သည်းခံထောက်ပြပေးပါ။)
神(かみ)懸かる(かかる) ဆိုတဲ့ စကားလုံးကနေလာပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုလို့ရပြီး၊ ‘သာမန်လူမဟုတ်ဘူး’ ‘နတ်ဘုရားလိုပဲ’ ‘magical’ ‘မိုက်တယ်၊လန်းတယ်’စသဖြင့် ထူးကဲသာလွန်တဲ့အရာတစ်ခုခုကို ပြောဆိုတဲ့အခါ ထည့်သုံးပါတယ်တဲ့။
ဒီစကားလုံးအတွဲဟာ ရုပ်ရှင်၊ကာတွန်းဇာတ်လမ်း၊ဝတ္ထု၊ဂိမ်းတွေရဲ့ ပြင်ပရိုက်ကွင်းတည်နေရာကို သွားရောက်ကြည့်ရှုတာကို ပြောပါတယ်။ နာမည်ကြီး ကာတွန်းဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ [Your Name]ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ရိုက်ကွင်းနေရာတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်သူများလာရာက ရေပန်းစားလာတာပါ။ [Your Name]ဇာတ်လမ်းပုံစံဟာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြားက ကြိုးစားရှင်သန်ခဲ့ရတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက် စိတ်ဓါတ်ခွန်အားရရှိခဲ့လို့ သွားကြည့်သူတွေ များပြားခဲ့တာပါတဲ့။ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင် ‘မြင့်မြတ်တဲ့နေရာကို သွားရောက်ကန်တော့ခြင်း၊ဝိညာဉ်ကန်တော့ခြင်း’ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်သွားနိုင်လို့ သတိပြုစေချင်ပါတယ်။巡礼တစ်မျိုးတည်းဆိုရင်တော့ တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုလို့ရပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ထရမ့် နေရာရသွားရာက ရေပန်းစားလာတဲ့ စကားလုံးလေးပါ။現象(げんしょう)က ဖြစ်စဉ်လို့အဓိပ္ပါယ်ရတော့ ထရမ့်ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်။^^
不倫(ふりん)က လူမှုရေးဖောက်ပြန်တာကိုရည်ညွှန်းပြီး၊ စကားလုံးအတွဲကတော့ အောက်တန်းကျတဲ့အိမ်ထောင်ရေးလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုကို ညွှန်းပါတယ်တဲ့။
金利(きんり)ဆိုတာ ဘဏ်အတိုးနှုန်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။マイナス金利(きんり) အတိုးနှုန်းထပ်ပေါင်းတာမဟုတ်ဘဲ (-0.1%)အဖြစ် လျော့သွားတာပါ။ ဒီအတိုးစနစ်ကို ဂျပန်နိုင်ငံဗဟိုဘဏ်မှ ကျင့်သုံးလိုက်တာပါ။ယခင်က ဂျပန်နိုင်ငံဗဟိုဘဏ်အတွင်း ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှ ငွေအပ်နှံထားပြီး၊ဗဟိုဘဏ်မှအတိုးနှုန်း0.1%ပေးခဲ့တာပါ။ ဒီဘဏ်အတိုးနှုန်းကို (-0.1%) ပြောင်းလိုက်တော့ ငွေအပ်နှံထားလည်း အတိုးမရတဲ့အပြင် အနှုတ်လက္ခဏာဆိုတော့ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ဘက်ကတောင် အခကြေးငွေပြန်ပေးရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီစနစ်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်က ငွေကြေးလိုအပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအပေါ် ငွေများများထုတ်ချေးပေးလာပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ဘက်ကစဉ်းစားကြည့်ပါက ဂျပန်ဗဟိုဘဏ်ကို ငွေအပ်တာထက်စာလျှင် ကုမ္ပဏီဆီ ငွေချေးလိုက်တာက အတိုးနှုန်းရရှိပြီး၊ တစ်ဖန် ကုမ္ပဏီတွေဘက်မှလည်း ရင်းနှီးငွေ အမြောက်အများရရှိလာပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်လို့ ပိုကောင်းသွားတာပေါ့။ဒါနဲ့ပဲ နာမည်ကြီးစကားလုံးထဲ ပါဝင်သွားပါတယ်။
မြေဖို့ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါ။ မြေနိမ့်နေရာ မြေဖို့တာတို့ အဆောက်အဦးအောက်ခြေမြေဖို့တာတို့ကို ပြောပါတယ်။ဒီစကားလုံးက နာမည်ကြီးငါးဈေးနေရာသစ် ဆောက်လုပ်ရာမှ စတင်ပါတယ်။ တိုကျိုမြို့ Chuo-ku မှာရှိတဲ့ ငါးဈေးကြီး(ဒိုင်) Tsukiji Fish market မှာ နေရာမဆံ့တော့တဲ့အတွက် ဈေးကို တိုကျိုပင်လယ်အော်ဘက်မှာ Toyosu Marketအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ဖို့ ဈေးသစ်ဆောက်လုပ်ပါတယ်။ Toyosu Marketတည်နေရာဟာ ယခင်က တိုကျိုဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် အန္တရာယ်ရှိ ဓါတ်သတ္တုပျက်ပြယ်စေရန် အောက်ခြေကို မြေကောင်းမြေသန့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်ထဲမှာလည်း မြေဖို့အစီအစဉ်ပါဝင်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းက နေရာတစ်ချို့မှာ မြေဖို့ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ထိုနေရာတွေမှာ အန္တရာယ်ရှိဓါတ်သတ္တုကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရာမှ သတင်းထဲ နာမည်ကြီးသွားတာပါ။တခြားပြဿနာတွေလည်း ရှိပါတယ်တဲ့။
အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ရဲ့စကားသံလေးပါ။ ကလေးထိန်းမူကြိုကျောင်းတိုးတက်ဖို့အတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ နည်းစနစ်တွေက အသုံးမဝင်လို့日本(にほん)死ね(しね)!!!(go to hell) လို့ ပြောလိုက်တာပါတဲ့။ ဒီစကားကြောင့် နည်းဥပဒေတွေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်သုံးသပ်စေတဲ့အထိ အစွမ်းထက်ခဲ့ပါတယ်။
နာမည်ကြီး ဂိမ်းဆိုတာ လူတိုင်းသိမှာပါ။ဂျပန်မှာလည်း လျှမ်းလျှမ်းတောက်ရေပန်းစားလို့ပါတဲ့။ pokemon go go
アモーレamore ဆိုတာ အီတလီဘာသာစကားနှင့် ‘ချစ်ရသောသူ’လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံကိုယ်စားပြုဘောလုံးသမား Yuto Nagamotoမှ သူနှင့်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကို မီဒီယာရှေ့ဖွင့်ဟပြောတဲ့အခါ သုံးနှုန်းသွားတဲ့ စကားလုံးလေးပါ။ ရိုမန့်ဆန်လွန်းလို့ တစ်ပြည်လုံး ရေပန်းစားသွားပါသတဲ့။
ဒါကိုတော့ မသိတဲ့သူ မရှိလောက်ပါဘူး။ ဒီသီချင်းဖွင့်ပြီး လိုက်ကဖူးသူတောင် မနည်းလှပါဘူးနော်။ ပီကိုတရော ရဲ့ သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။
မနှစ်က လှုပ်ခတ်သွားတဲ့ ခုမမိုတိုငလျင်ကြောင့် ပျက်ဆီးသွားတာတွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားလုံးလေးပါ။ ရဲတိုက်အရှင်သခင်ပါနော်။
Link : http://singo.jiyu.co.jp/
Previous Previous post: ဂျပန်ရဲ့ ワクワク အိုရှီငေါ့တို ဒရမ်မာ
Next Next post: ရ ရထားကြီးပျော်ပျော်စီး